်ပြီး သိသမျှကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်ကို ၁၉၃၉- ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၁၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ သံလျင်မြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်ရွာ (ကျောက်တန်း) တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ တရုပ်နွယ်ဖွား တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးနောက် ပေါင်းတည်မြို့တွင် အခြေခံပညာကျောင်းဆရာတစ်ဦးအဖြစ် အမှုထမ်းနေစဉ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက လာရောက်လည်ပတ်ရာတွင် တွေ့ရှိသဘောကျ သွားသဖြင့် အနားသို့ ခေါ်ကာထားရှိရာမှ မမျှော်လင့်ဘဲတပ်မတော်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ဗိုလ်လောင်း သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၂၅) ကို တက်ရောက်ကာ ရာထူးအလွန်အတက်မြန်သဖြင့် အများကပင် အံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ ဦးနေဝင်း၏သမီးဖြစ်သူ ဒေါ်စန္ဒာဝင်းနှင့် မောင်နှမသဖွယ် အလွန်ရင်းနှီးသည့် ဆက်ဆံ့ရေးမျိုး ရှိခဲ့ကြသည်။ (မကြီး၊ မမ ဟုပင် ရင်းနှီးစွာခေါ်ဝေါ်သည်ဟု ကြားဖူးသူတို့က ဆိုကြသည်။)
Pls also need to mention how the MIs has cracked down brutally the Democrats in detail.
THE RIGHT ARM OF JUNTA,NE WIN
THE NEW GENERATION OF MILITARY GANGSTER,who destroyed the country for 50 years,putting our country to be the poorest in world.
Conduct uncountable criminals to the innocent citizens,students & monks
The gangster,go to the hell faster
FIRST HAND TEACHER: JUNTA,NE WIN
NEW GENERATION:SEIN LWIN
ALL GANGSTER PUT OUR COUNTRY INTO THE POOREST IN THE WORLD.
BUT THEIR FAMILY BECOME RICHER,HEALTHIER AND LONG LIFE.
NOW THEY ARE GOING TO PRODUCE
ATOM WEAPON FOR PROTECTION OF THEIR LONG LIFE.
khin nyt means dog of war